Rugby – «Mondial 2019»: hifandona amin’i Japon ny Afrikanina Tatsimo | NewsMada
Rugby – «Mondial 2019»: hifandona amin’i Japon ny Afrikanina Tatsimo
Miato aloha ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja baolina lavalava «Mondial 2019», tanterahina any Japon. Efa tontosa avokoa mantsy ny fifanintsanana isam-bondrona ary efa nivoaka ny anaran’ireo firenena valo hiatrika ny ampahefa-dalana. Hanomboka ny asabotsy 19 oktobra ho avy izao izany dingan’ny famaranana izany.
Anisan’ny goavana ny fifanandrinan’i Japon, mpampiantrano, sy ny Springboks, afrikanina tatsimo, hany ekipa afrikanina mbola manohy ny dia. Raha ny vinavinan’ny rehetra, hiendrika famaranana kely ity lalao ity. Manana ny tombony aloha ry zareo Japoney, noho izy ireo hilalao eo anatrehan’ny mpomba azy sy amin’ny kianjany. Hany mety hampiavaka ny Afrikanina Tatsimo kosa ny fahazaran’izy ireo miatrika lalao goavana. Efa manana traikefa amin’izany mantsy ireo mpilalao mandrafitra ny Springboks.
Ankoatra izay, hifanazava amin’ny All Blacks avy any Nouvelle-Zélande, tompondaka eran-tany farany, ry zareo Irlandey. Raha ny fifanandrinana teo amin’ny roa tonta aloha, tsy mbola nandresy an-dry zareo All Blacks mihitsy ny Irlandey ka amin’ity, hanala vela indray izy ireo.
Hifampitana ihany koa i Angletera sy i Aostralia. Nifandanja ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Eto izany no tsontsori-mamba hisarahana ho azy ireo. Farany, hifampitana amin’i Pays des Galles kosa ny Frantsay. Hangotraka ihany koa ny fihaonana eo amin’izy ireo satria samy andrarezina no hidona.
Asabotsy 19 oktobra
-Irlande # Nouvelle-Zélande
-Angletera # Aostralia
-Japon # Afrika Atsimo
-Frantsa # Pays des Galles